English for Hotel and Catering Industry (Unit6- Receiving Guests) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on November 6, 2012 at 17:30 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယဉ်ကျေးစွာတောင်းပန်ခြင်း၊ ရှင်းပြခြင်း၊ နဲ့ be, do, can တို့ရဲ့ present simple short form တွေကိုအရင်သင်ခန်းစာမှာလေ့လာခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ Receiving Guests ဧည့်သည်လက်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်တစ်ခုကိုဧည့်သည်ရောက်လာ တဲ့အခါကြိုဆိုလက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေလေ့လာရပါမယ်။
Receiving Guests (ဧည့်သည်လက်ခံခြင်း)
Staff : Good afternoon sir. Can I help you?
Guest : Good afternoon. My name is Rodrigues. I’d like to check in please.
I haveareservation foradouble room.
Staff : Yes, Mr. Rodrigues, let me see… Yes, today and tomorrow, the 10th and 11th of June.
Could you please fill in this registration card?
Guest : Yes of course. Do I fill in my home address?
Staff : Yes, please and could I have your passport? Thank you. Your room
number is 361. It’s on the third floor and here’s your key card for
your room. Would you like to have dinner in the restaurant this evening?
Guest : Yes, please. Can you reserve meatable for2at 8 o’clock?
Staff : Certainly. The porter will help you with your luggage. The lift is just down the corner.
Check in ဆိုတာ ဟိုတယ်၊ လေဆိပ် စတာတွေမှာ ဧည့်ကြိုစာရေး ရဲ့ ကောင်တာမှာရောက်ရှိကြောင်း သတင်းပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Check in လုပ်တာနဲ့တပြိုင်နက်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များကို register လုပ်တဲ့အတွက် ခြုံပြီးပြောရရင် အခန်းရယူခြင်း၊ ဟိုတယ်မှာစတည်းခြင်းလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာ ကျသင့်ငွေရှင်းပြီး အခန်းပြန်အပ်တာကိုတော့ Check out လုပ်တယ်လို့သုံးပါတယ်။ ဧည့်သည်အမျိုးအစားတွေပြောရရင် FIT (Free Independent Traveler) နဲ့ Group ဆိုပြီးအကြမ်းဖျင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Group ကခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေကနေ package tour အနေနဲ့လာတာတွေလဲရှိပါတယ်။ Company Guaranteed rate (CGR)၊ Group inclusive tour (GIT) ဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ရာသီစာ ဟိုတယ်နှင့်ကုမ္ပဏီများကြား contract rate နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ အများစုကကြိုတင် reservation လုပ်ထား လေ့ရှိပါတယ်။ ကြိုတင် reservation မလုပ်ထားဘဲသူ့ဘာသာ ၀င်လာတဲ့ဧည့်သည်ကို Walk in guest လို့ခေါ်ပါတယ်။
I’d like to check in please. အခန်းယူချင်လို့ပါ။
Could you please fill in this registration card? ဒီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကတ်မှာလိုအပ်တာဖြည့်ပေးနိုင်မလားရှင်။
Your room number is 361. It’s on the third floor. လူကြီးမင်းအခန်းနံပါတ်က 361 ပါ။ တတိယထပ်မှာရှိပါတယ်။
Here’s your key card for your room. ဟောဒီမှာလူကြီးမင်းရဲ့အခန်းသော့ကတ်ပါ။
Would you like to have dinner in the restaurant this evening? ဒီညနေစားသောက်ဆိုင်မှာညစာစားမလားရှင်။
Can you reserve meatable for2at 8 o’clock? ညနေ ၈ နာရီမှာ နှစ်ယောက်စာစားပွဲတစ်လုံးကျွန်တော့်ကိုမှာထားပေးနိုင်မလား။
hair salon = ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်
lobby = ဟိုတယ်အ၀င်ဝရှိ ဧည့်သည်များနားနေရန်အခန်းကျယ်
lounge = ဧည့်သည်များနားနေခန်း
reception desk = ဧည့်ကြိုကောင်တာ
home address = အိမ်လိပ်စာ
luggage(US baggage) = ခရီးဆောင်အိပ်
porter = ပစ္စည်းသယ်ပိုးပေးသည့်အကူဝန်ထမ်း
ဒီနေရာမှာ ဟိုတယ်တွေမှာသုံးတဲ့ terminology တစ်ချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ porter, bellboy, bellhop ဆိုတာတွေကို တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အလဲအလှယ်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ bellhop ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဖြစ်ပေါ်လာပုံက ဟိုးအရင်တုံးက ဟိုတယ်တွေမှာ တစ်ခုခုသယ်ဖို့ပြုဖို့၊ ခိုင်းဖို့ ခေါင်းလောင်းတီးလိုက်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းကရောက်လာရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ သူ့ကို bellhop, bellboy လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ နောက် concierge ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ သူ့ကို
(1)afacility staff who provides special services such as tickets to local events, transportation, and tour arrangement
(2) designated area in hotel facility providing special amenities and services to guests.
လို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားတော့ ဧည့်သည်ကို အထူးကိစ္စတွေမှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဝန်ထမ်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကားပါကင်ထိုးပေးတဲ့ဝန်ထမ်းကိုကျတော့ valet လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခေါ်အဝေါ်နဲ့လုပ်ရတဲ့တာဝန်အတိအကျတွေဟာ ဟိုတယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြရာမှာပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။ possessive adjectives နဲ့ possessive pronouns တွေကိုသုံးခြင်းကိုကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့ဟာဝါကျမှာနေရာယူပုံမတူပါဘူး။ အောက်မှာလေ့လာကြည့်ပါ။
My dog is big. Her cat is brown. Their sister works downtown.
The dog is mine. The brown cat is hers. The car is ours.
possessive adjectives များသည် noun ရဲ့အရှေ့မှာလာပြီးတော့ possessive pronouns များသည် noun ရဲ့နောက်မှာလာသည်။
This is my car. The car is mine.
Is that your pen? Is that pen yours?
၁။ အောက်ပါဝါကျများကိုသင့်တော်သည့် possessive သုံး၍ဖြည့်ပါ။
Could I have dinner in …………………… room, please?
Would you like some help with ……………… luggage?
We’d like to have lunch in ………………….. room.
He wants to know where to park ………………………… car.
As Ms. Lee for …………….. passport.
Scott and Josh are waiters at Sydney Tower Restaurant. That’s …………… job.
၂။ အောက်က puzzle လေးမှာ နောက်ထပ် check in နဲ့ပါတ်သက်တဲ့စကားလုံးဆယ် လုံးထပ်ရှာကြည့်ပါဦး
၃။ သူငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပုံကိုကြည့်ပြီးအမေးအဖြေလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ တစ်ယောက်တည်းဆိုရင် အပြောလေ့ကျင့်ရုံမက အမေးနဲ့အဖြေကိုချပြီးရေးကြည့်ပါ။
A: Excuse me, where is the florist?
B: It’s next to . . .
ကဲနောက်ဆုံး မှတ်သားဆင်ခြင်စရာ အဆုံးအမလေးတွေနဲ့ခဏနားလိုက်ရအောင်။
အလုပ်ရှင်ကလုပ်ခပေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကငွေကြေးကိုကိုင်တွယ်ထိမ်းသိမ်းရုံပဲ။ တကယ်ပေးတာက စားသုံးသူတွေ။
စားသုံးသူကသင့်ဆီကပြီးပြည့်စုံမှုကိုမမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုပြဿနာဖြစ်လာရင် သင်ဖြေရှင်းပေးတာကိုတော့မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။
Permalink Reply by The` on November 7, 2012 at 16:22
Permalink Reply by Thike Htun on November 8, 2012 at 18:47
Permalink Reply by nangkyayone on November 11, 2012 at 20:13
Permalink Reply by aunghtedmyat on November 25, 2012 at 10:34
ံThank you so much for this knowledge.
Permalink Reply by Win Shwe Maung on July 11, 2013 at 23:43
Thank You for the daily course